China Indlela yokuhlukanisa nokusebenzisa izambatho zokuzihlukanisa kanye nezingubo zokuvikela ezokwelapha zokukhiqiza kanye neFektri | Zhongmaohua
Ungahlukanisa futhi usebenzise kanjani izingubo zokuzihlukanisa nezingubo zokuzivikela zokwelashwa
Uyini umehluko nokusetshenziswa kwezingubo zokuzihlukanisa nezingubo zokuzivikela zokwelashwa ikakhulukazi ukuthi izingubo zokuvikela ezempilo zihlala isikhathi eside kunokugqoka zokuzihlukanisa, zinezinga eliphakeme lokuvikela nokusebenza kangcono kokuvikela. Ngaphezu kokuhlangabezana nezidingo ezigqokwa zamandla aphezulu nokugqokwa kokugqoka okuphezulu, lokhu kuvame ukuhluka ngenxa yezinhloso ezihlukile zokuvikela kanye nemigomo yokuvikela.
Ungahlukanisa kanjani phakathi kokuzihlukanisa kanye nezingubo zokuvikela zokwelashwa
Noma izembatho zokuvikela ezokwelapha zingcono kunezingubo zokuzihlukanisa, kodwa izindleko ziphezulu, ngakho ngemisebenzi ehlukene, ukukhetha kwezingubo zokuvikela kuzohluka. Umehluko phakathi kwezimpawu zezingubo zokuvikela zokwelashwa nezingubo zokuzihlukanisa.
Izingubo zokuvikela zokwelashwa
Ukuvikelwa kwemisebenzi nokusetshenziswa
Izingubo zokuvikela ezokwelashwa yizinto zokuvikela zokwelapha ezigqokwa ngabasebenzi bezokwelapha emtholampilo lapho behlangana neziguli ezine-Class A noma Class A izifo ezithathelwanayo. Izigqoko ze-Isolate ziyimishini yokuvikela esetshenziswa abasebenzi bezokwelapha ukuvikela ukungcoliswa yigazi, uketshezi lomzimba nezinye izinto ezithathelwanayo, noma ukuvikela iziguli ekuthelelekeni.
Izinkomba zomsebenzisi ezihlukile
1. Lapho uthintana neziguli ezinezifo ezithathelwanayo ezidluliswa ngothintana naye, njengeziguli ezinezifo ezithathelwanayo, iziguli ezingena ngegciwane elivimbela ukutheleleka ngamagciwane, njll.
2. Ukuzihlukanisa okuvikelayo kweziguli, njengokuxilongwa nokwelashwa kweziguli ezishiswe kakhulu neziguli ngokuguqulwa kwamathambo.
3. Lapho isiguli singasakazwa yigazi, uketshezi lomzimba, umkhuhlane kanye nezinduku.
4. Ukungena eminyangweni ebalulekile njenge-ICU, NICU, amawadi okuvikela, njll., Noma ngabe ukugqoka izingubo zodwa, kufanele kususelwe enjongweni yabasebenzi bezokwelapha yokungena nokuxhumana neziguli, nemithetho yangaphakathi eyanele.
Gqoka izembatho zokuvikela ezokwelapha:
Lapho zivezwa yiziguli ezithinta umoya nezigciwane ezithathwa ngamaconsi, zingaphanjululwa yigazi lesiguli, uketshezi lomzimba, umkhuhlane, kanye nokugoma.
Ukusetshenziswa okuhlukile kwezingubo zokuvikela
Izingubo zokuvikela ezokwelashwa ukuvimba abasebenzi bezokwelapha ukuthi bangafikelwa yileli gciwane. Kungokokuhlukaniswa yodwa futhi kuhloselwe ikakhulukazi abasebenzi bezokwelapha; nezingubo zokuzihlukanisa yodwa ukuvimba izisebenzi zezokwelapha ukuthi zingatheleleki noma zingcoliswe futhi zivikele neziguli ukuthi zingatheleleki.
Izinzuzo zezingubo zokuvikela zokwelashwa ngaphezulu kwezingubo zokuzihlukanisa
1. Izingubo zokuvikela zezokwelapha nazo ziyingxenye yemishini yokuvikela yezokwelapha. Isidingo sayo esiyisisekelo ukuvimba izinto ezinobungozi njengamagciwane namagciwane, ukuvikela abasebenzi bezokwelapha ekuthelelekeni ngesikhathi sokuxilongwa nokunakekelwa.
2. Izingubo zokuvikela ezokwelashwa kumele futhi zihlangabezane nezidingo ezijwayelekile zokusebenzisa, ngokunethezeka okungcono kokuphepha kanye nokuphepha, njengokuqina komswakama okungcono, ukusebenza kokuvutha komlilo kanye nokuphikiswa kotshwala.
3. Izingubo zokuvikela zezokwelapha zinezimpawu zomsebenzi we-anti-permeation, ukuphefumula okuhle, amandla aphezulu nokumelana okuphezulu kwengcindezi ye-hydrostatic. Isetshenziswa ikakhulu ezindaweni zezimboni, ze-elekhtroniki, zezokwelapha, zamakhemikhali nezifo zokuvimbela ukutheleleka ngegciwane.
Elinye iphuzu futhi lihlukile. Labo abahlinzeka izibhedlela ngokwesicelo sikahulumeni badinga "imvume yokubhaliswa kwezokwelashwa", ngakho-ke zonke izembatho zokuvikela ezokwelashwa kumele zibe nezitifiketi, kanti nezingubo zokuzenzela zodwa zivame ukusetshenziswa emfuyweni, endaweni yokuhlanza izingane, njll. Wonke umuntu kufanele anake ukuthi labo abangenazo isitifiketi singenza kuphela isivivinyo sokugqoka sodwa futhi asikwazi ukusinikeza esibhedlela.
Isikhathi sokuthumela: Meyi-07-2020